Caalaa Bultumee Pirofeesar #Mahaammad Hasan Alii barsiisaa barnoota sadarkaa olaanaa fi hayyuu seenaati. Pirofeesar Mahaammad seenaa Oromoo irratti qorannoo gochuun kitaabotaa fi barruulee qorannoo adda addaa baayyee maxxansiise. Ijoollumma Isaa Pirofeesar Mahaammad Harargee, Gaara Mul’ataatti dhalate. Iddoon magaalaa Hararirraa 150km fagaatee argama. Akkuma ijoollee badiyaa kamuu, pirofeesar Mahaammad yeroo ijoollummaa loon tiksaa maatiisaa gargaara ture. Boodarra, gara magaalaa […]
(Hagayya 5, 2017) — MOGOR! Godina Lixa Shaggar Aanaa Adaa’aa Bargaa Magaalaa Mogoriitti Galgala har’aa sa’aa 2:30 irratti Humni Addaa Ittisa Ummata Oromoo Gartuun Qeerransa Mogor jedhamu, Tarkaanfii haleellaa Hotelaa Qabeenya basaasa Wayyaanee irratti tarkaanfii Fudhate. Mogor keessatti Hoteela Basaasaa Wayyaanee Darajjee Seefuu jedhamuu irratti haleellaa boombii fudhateen daaressee jira. Basaasaan Wayyaanee kuni yeroo garaagaraatti […]